Igumbi le-panoramic e-Monte Prât - Friland - I-Airbnb
Igumbi le-panoramic e-Monte Prât - Friland
Kusukela efasiteleni elikhulu laseFriland ungakwazi ukujabulela izindawo ezingavamile, ukuphuma nokushona kwelanga, umbono ongenakuqhathaniswa we-Tagliamento ne-Arzino, kuyilapho ngaphakathi ungakhululeka futhi unqamule ukuba nakho konke ukunethezeka okudingekayo.
Indawo yokuhlala isendaweni eyingqayizivele, ukukunikeza ukusondelana nethuba lokuba nesipiliyoni esiyingqayizivele ngempela sohlobo lwayo.
I-Friland yithuba lokuthatha ikhefu empilweni yansuku zonke futhi uchithe isikhathi esithile usondelene nemvelo, ezindaweni ezinhle kakhulu.
I-Friland iyindlu encane eselula futhi ezimele (ngaphandle kwegridi). Inazo zonke izinkonzo ezijwayelekile zekhaya.
Ku-12 sqm uzothola: umbhede ophindwe kabili, ikhishi, ishawa kanye nendlu yangasese (okungeyona amakhemikhali), ukufudumeza nomoya. Indawo ezungezile ibonakala ngendawo ebalulekile kodwa eyamukelekayo, enikeza ukusondelana nokuphila kahle. Amafasitela amakhulu anendawo yokuhlala akunikeza ithuba lokucwiliswa ngokuphelele ku-landscape.
- 2 amalitha amanzi okuphuza
- insipho yemvelo kanye ne-shampoo
Indawo yokuhlala inokuzimela okulinganiselwe kodwa ngokuvamile yanele ukusetshenziswa okusesilinganisweni kwamanzi, ukusetshenziswa kwezindlu zangasese, nogesi. Ukuzimela kwenziwa ngenxa yohlelo oludidiyelwe lokuphatha amanzi kanye nokusetshenziswa kwamaphaneli e-photovoltaic.
Igumbi liyahlanzwa futhi lihlanzwe ngaphambi kokuhlala ngakunye.
Isivakashi sizokwazi ukufinyelela esakhiweni ngokuzimela okuphelele ngenxa yesistimu yokuzihlola, nokho sizohlale sitholakala ngocingo nganoma yisiphi isenzakalo.